सेयर बजारः यो साता के होला?
काठमाडौं, वैशाख २८ः गत साता १२९४ दशमलब ३९ बिन्दुमा खुलेको नेप्सेले १३११ दशमलब १८ को ‘इन्ट्राडे’ उच्च बिन्दु बनाएको थियो। त्यस्तै, न्यून बिन्दु १२७० दशमलब ०६ थियो भने बजार १२९१ दशमलब ९६ मा बन्द भएको थियो। यो अघिल्लो साताभन्दा २ दशमलब ४३ अंक अर्थात ० दशमलव १९ प्रतिशतको गिरावट हो । गत साता पाँच दिनमा ३ अर्ब ४६ करोड बराबर कारोबार भएको थियो ।
विगत ९ महिनादेखि बजारको उतारचढाव कस्तो रह्यो भनी हेर्न चित्र नं. १ मा नेप्सेको साप्ताहिक मैनबत्तीहरु प्रयोग गरिएको छ। अघिल्लो साप्ताहिक विश्लेषणको निष्कर्षअनुसार १२८० सामान्य टेवा रहेको थियो। यो साता नेप्सेले यो टेवालाई निश्चित रुपमा तोड्न असफल रहेको र मैनबत्ती आकृतिले बजारमा लगानीकर्ता अन्योल अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ।
२०० एक्सपाेनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए) बजारको प्रवृत्तिभन्दा माथि नै रहेकोले हालसम्म बजार सकारात्मक क्षेत्रमा नै भएको संकेत गरेको छ। त्यस्तै गरि नेप्सेको प्रवृत्ति पनि हालसम्म सकारात्मक क्षेत्रमा नै रहेको देखिन्छ।
दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिले पछिल्लो समय १२७० मा टेवा प्राप्त गरेपछि बजार बढ्ने क्रममा १३२३ को अघिल्लो उच्च बिन्दुलाई तोड्न असफल रहेकाे देखाउँछ। यसले बजारमा क्रेताको चाप कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ।
६ र २१ दिनको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेजहरु एकआपस नजिकिंदै गएकोले बजारमा क्रेताको चाप कमजोर हुंदै गएको संकेत गरेको छ। स्टोकास्टिक अक्सिलेटर ८० अंकभन्दा तल झरेको छ। यसको प्रवृत्तिले शेयर बढी खरिद भएवापत उप्रान्त केही समय आपूर्ति बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ । डाइरेक्सनल मुभमेन्टले पनि बजारमा क्रेताको चाप कम हुँदै गएको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : नेप्से प्रवृत्ति र सूचकहरुले बजार केही सच्चिन सक्ने संकेत गरे पनि बजार सकारात्मक क्षेत्रमा नै रहेको देखिन्छ। समग्रमा, यदि बजार १३२५ भन्दा माथि स्थिर रहन सके बजार फेरि पनि केहि समयको लागि बढ्दो प्रवृत्तिमा हुन सक्ने संकेत गर्दछ। त्यस्तै गरि यदि बजार १२७० भन्दा तल रहेमा बजार केहि सच्चिन सक्ने संकेत गर्दछ र अर्को सामान्य टेवा १२४५ देखि १२६० को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Saturday, 11th May 19:05:49 PM